Afaka ny ho Sambatra Ianao Dieny Izao
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 3 2019
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Dangme Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Télougou Urhobo Uruund Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa Éwé
ERITRERETO hoe tsy misy intsony ny olona marary, na antitra, na maty. Afaka ny hiaina an’izany ianao amin’ny hoavy! Mbola be dia be anefa ny olana amin’izao. Inona àry no hanampy anao ho sambatra sy ho afa-po dieny izao? Misy torohevitra tena tsara ao amin’ny Baiboly. Andao isika hijery ohatra vitsivitsy.
MIEZAHA HIANINA AMIN’IZAY ANANANAO
Torohevitry ny Baiboly: “Aoka ny fomba fiainanareo tsy hisy fitiavam-bola, fa aoka ianareo hianina amin’izay efa eo.”—Hebreo 13:5.
Mampirisika antsika hanana zavatra be dia be ny tontolo misy antsika. Tsy ho sambatra, hono, isika raha tsy manana azy ireny. Milaza anefa ny Baiboly fa afaka ‘mianina amin’izay efa eo’ isika. Ahoana no hanaovana an’izany?
Aza ‘tia vola.’ Ny vola izao no zava-dehibe kokoa amin’ny olona sasany, fa tsy ny fianakaviany sy ny namany. ‘Tia vola’ koa ny olona, ka tsy raharahainy intsony ny fahasalamany, ny fitondran-tenany, na ny fahitan’ny hafa azy. (1 Timoty 6:10) Ho voa mafy izay manao an’izany! “Tsy ho afa-po” amin’izay harena azony koa izy.—Mpitoriteny 5:10.
Aza atakalo fananana ny olona. Marina aloha hoe ilaintsika ny fitaovana toy ny telefaonina sy ny ordinatera. Tsy afaka ny ho tia anao sy hankasitraka anao anefa ireny. Ny olona ihany no mahavita an’izany. Afaka manampy anao ho afa-po amin’ny fiainana ny “tena namana.”—Ohabolana 17:17.
AFAKA NY HO SAMBATRA IANAO DIENY IZAO RAHA MANARAKA NY TOROHEVITRY NY BAIBOLY
MIEZAHA HO FALIFALY NA DIA MARARY AZA
Torohevitry ny Baiboly: “Ny fo falifaly dia sady mahasoa no manasitrana.”—Ohabolana 17:22.
Manampy antsika hizaka ny aretina mahazo antsika ny “fo falifaly.” Inona anefa no hanampy antsika ho falifaly foana na dia marary aza?
Miezaha hahay hankasitraka. ‘Hanjombona foana ny androntsika’, raha ny aretintsika no ifantohantsika. (Ohabolana 15:15) Miezaha àry ‘hahay hankasitraka’, na dia amin’ny zavatra kely aza. (Kolosianina 3:15) Manampy antsika hankafy fiainana, ohatra, ny masoandro mody, ny tsio-drivotra malefaka, na ny tsikitsiky avy amin’ny olona tiantsika.
Manaova zavatra ho an’ny hafa. Tadidio foana hoe “mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.” (Asan’ny Apostoly 20:35) Mahatsiaro ho afa-po isika rehefa mankasitraka ny ezaka nataontsika ny hafa. Lasa tsy mieritreritra be an’ilay aretintsika isika amin’izay. Ho sambatra kokoa isika raha manampy ny hafa ho sambatra.
MIEZAHA HANANA TOKANTRANO SAMBATRA
Torohevitry ny Baiboly: ‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’—Filipianina 1:10.
Tokony ho anisan’ny zava-dehibe indrindra amin’ny mpivady ny fanambadian’izy ireo. Mety tsy hifankatia be intsony izy ireo raha indraindray ihany vao miaraka.
Miaraha manao zavatra. Ahoana raha atao ao anatin’ny fandaharam-potoananareo mihitsy izany? Milaza ny Baiboly hoe: “Tsara ny roa noho ny iray.” (Mpitoriteny 4:9) Azonareo atao, ohatra, ny miaraka mahandro sakafo, manao fanatanjahan-tena, manao raharaha, na mitsangantsangana.
Asehoy hoe tianao ny vadinao. Milaza ny Baiboly hoe tokony hifankatia sy hifanaja ny mpivady. (Efesianina 5:28, 33) Inona, ohatra, no hanampy azy ireo hifankatia kokoa? Tsy voatery ho zavatra lehibe foana ilay izy, fa mety hoe tsikitsiky na fanomezana kely. Tsy tokony hohadinoin’ny mpivady koa hoe amin’ny vadiny ihany izy no tokony hanao firaisana.—Hebreo 13:4.
“LASA MISY DIKANY NY FIAINAKO!”
—Notantarain’i Ryoko Miyamoto, any Japon.
Tena mafy ny fiainanay taloha. Nisotro toaka be ny vadiko, dia tsy nateza tamin’ny asany mihitsy. Efatra ny zanakay nefa tsy nety namelona anay intsony izy. Mba niasa mafy ihany aho, fa hoatran’ny tsy nisy mangirana mihitsy ny fiainanay. Lasa saina aho hoe: ‘Izao ve no lahatra? Sa nisy zavatra tsy nety nataoko tamin’ny fiainako taloha, dia avalin’Andriamanitra amiko ilay izy?’
Nisy Vavolombelon’i Jehovah tonga tao aminay indray andro. Faly erỳ izy niresaka tamiko momba ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Nasainy hianatra Baiboly aho. Lasa fantatro hoe misy Andriamanitra, ary mahira-tsaina izy, manao ny rariny, sady be fitiavana. Lasa haiko hoe manao ahoana ny olona rehefa maty. Fantatro koa hoe tsy lahatr’Andriamanitra no nahatonga ahy hijaly.
Tsy izay ihany anefa. Hitako hoe sambatra isika rehefa mifandray tsara amin’Andriamanitra. Izany no tena nahafaly ahy. Maivamaivana aho rehefa nahafantatra hoe inona marina no ampianarin’ny Baiboly. Lasa misy dikany ny fiainako!
Inona no Tena Mahasambatra? Te ho Sambatra ny Olona
Sambatra ve Ianao? Inona no tena mahasambatra?
Tsy Azo Ialana ny Fahafatesana
Te ho Ela Velona ny Olona
Natao Hiaina Mandrakizay Isika
Nahoana Isika no Mihantitra sy Maty?
Ahoana no Handresena ny Fahafatesana?
Inona no Tokony Hataonao Raha Te Hiaina Mandrakizay Ianao?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 3 2019 | Izao Fotsiny ve ny Fiainana?
No. 3 2019 | Izao Fotsiny ve ny Fiainana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 3 2019 | Izao Fotsiny ve ny Fiainana?
Afaka Manova Zavatra ve ny Toe-tsaina?